अज्ञात रोगले फैलियो त्रास : सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, माघ ७, २०७६
बिरामी बालक जाँच गर्दै रत्ननगर अस्पतालका मेसु बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वबन्धु बगाले ।
भरतपुर । रत्ननगर क्षेत्रमा दुई बालकको निधन भएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरु सामान्य बिरामी भएको अवस्थामा पनि आत्तिन थालेका छन् । बिरामी बालबालिका लिएर अस्पताल आउनेहरु बढेको रत्ननगर बकुलहर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वबन्धु बगालेले बताए ।
साँच्चै बालबालिकामा घातक किसिमको समस्या देखिन थालेको हो ? भन्ने प्रश्नमा डा. बगालेले भने, ‘मौसम परिवर्तन र बालबालिकामा अन्य समयमा पनि देखिने समस्याहरु भएर आउने गरेका छन्, तर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ बालबालिकाको चाप पहिलेको तुलनामा केही बढेको उनले बताए । पहिले ६० जनाजति हुने गरेकोमा अहिले औसत १०० जनासम्म हुने गरेको छ ।
अनौठो प्रकृतिको वा उपचार सम्भव नभएका बालबालिका भने नभेटिएको मेसु डा. बगालेको भनाइ छ । ‘बान्ता हुने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या भएका केही बालबालिका आएका छन्’, उनले भने, ‘यसबाट आत्तिन पर्दैन, गम्भीर देखिए अस्पतालमा भर्ना गरेर निरन्तर डाक्टरको निगरानीमा उपचार गर्ने गरेका छौँ ।’ रत्ननगर बकुलहर अस्पतालमा बच्चाको उपचारका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार दुवै राम्रो भएकाले कमैमात्र भरतपुर रिफर हुने गरेको मेसु डा. बगालेले बताए ।
भरतपुर अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलाले कुनै असामान्य लक्षण देखिएमा तत्काल विशेषज्ञ डाक्टरसँग जँचाउनुपर्ने बताए । पहिला गाउँघरकै साना वा सामान्य मेडिकलमा देखाउने र चापेपछि बल्ल ठूला अस्पताल दौडाउने प्रवृत्तिले बिरामीको अवस्था तलमाथि हुन सक्ने भन्दै उनले यसतर्फ अभिभावक सचेत हुनुपर्ने बताए ।
पहिला मेडिकल अनि अस्पताल
तीन वर्षको छोरा बिरामी भएपछि रत्ननगर–३ की टीका कँडेल आत्तिँदै रत्ननगर अस्पताल आइपुगिन् । उनले डाक्टरलाई बिरामीको अवस्था बताउनु पहिले पाँच दिनअघि निजी मेडिकल हलमा जाँच गरेर खुवाएको औषधि देखाइन् । घरनजिक निजी मेडिकल भएकाले गएको उनले बताइन् । निजी मेडिकलको औषधिले बिरामीको अवस्थामा सुधार नभएपछि उनी सोमबार रत्ननगर अस्पताल पुगिन् ।
डाक्टरले बिरामीलाई सुरूवातमै अस्पताल आउनुपर्ने सुझाए । निजी मेडिकलले अनावश्यक औषधि दिने र विशेषज्ञता नभएका मानिसहरुले औषधि दिने हुँदा बच्चाको अवस्था सुधार नहुने गरेको मेसु डा. बगालेले बताए ।
एकै गाउँका दुई बालकको निधन भएपछि गाउँका मानिसहरुले उपचार भएको बालकहरुको उपचार प्रक्रियाबारे नारायणी सामुदायिक अस्पताल व्यवस्थापन पक्षबाट जानकारी लिएका छन् । यस विषयमा अस्पतालले तीन दिनभित्र जानकारी गराउने भनी आइतबार छलफल भएको स्थानीय पुष्पराज शर्माले बताए ।